Toni Kroos oo ka hadlay guushii weyneyd ay xalay ka gaareen Galatasaray, muxuuse ka yiri xiddigaha Bale iyo James? – Gool FM
Man Utd oo guul ay u qalantay ka gaartay Watford, xilli Bruno Fernandes uu furtay akoonkiisa goolasha ee Red Devils… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka Man United iyo Watford ee horyaalka Premier League oo la shaaciyay
Ole Gunnar Solskjær oo sheegay in Bruno Fernandes uu noqon doono mid ka mid ah halyeeyadii ugu fiicnaa ee soo martay Man United
Koox cusub oo ku soo biirtay loollanka Pogba… (Iska ilow Real Madrid iyo Juventus)
Pep Guardiola oo ka warbixiyay xaaladda dhaawac ee Laporte & Sterling ka hor kulanka Real Madrid
Bartilmaameedka Kooxda Liverpool ee Timo Werner oo ammaanay macallin Jurgen Klopp
“Dhaawaca Hazard uma muuqdo mid… sidoo kale waa inaan guuleysano kulanka El Clasico” – Zidane
Dajiye November 7, 2019
(Madrid) 07 Nof 2019. Xiddiga khadka dhexe kooxda Real Madrid iyo xulka qaranka Germany ee Toni Kroos ayaa difaacay xiddigaha Gareth Bale iyo James Rodríguez kaddib markii eedeymo xoogan la kulmeen xilliyadii la soo dhaafay.
Waxaa xusid mudan in xiddigaha Gareth Bale iyo James Rodríguez ay la kulmeen eedeymo, kaddib markii ay ka dhaqaaqeen garoonka Santiago Bernabeu kulankii Real Betis ee Sabtidii lasoo dhaafay 10 daqiiqo kahor dhamaadka ciyaarta.
Haddba Toni Kroos ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Marca” ee dalka Spain wuxuu ku sheegay:
“Waxaan rajeenayaa in xiddigaha Gareth Bale iyo James Rodríguez ay inoo soo laaban doonaan kaddib kulamada caalamiga ah”.
Sidoo kale Toni Kroos ayaa wuxuu ka hadlay guushii weyneyd ee 6-0 aheyd ay xalay Real Madrid kaga gaartay kooxda Galatasaray tartanka Champions League wuxuuna yiri:
“Waxaan dareemayaa in qaab ciyaareedka kooxda uu soo fiicnaanayo isbuucyadii dhawaa iyo xitaa kulankii Real Betis ee aan barbaraha la galnay, waxaan soo bandhignay qaab ciyaareed wanaagsan”.
“Laakii kulankii aan wajahnay Galatasaray waxaan goolal dhalinay xilli hore taas ayaana inoo sahashay wax walba”.
Messi oo doortay macalinka cusub ee Barcelona si uu u noqdo bedelka Valverde bisha Janaayo ee soo aadan